Ukutya isidlo sangomntwana
Iseti yokutya isidlo somntwana
Indebe yokusela yomntwana
Iimveliso ze-Silicone Teething
Isongo / umqala / umdlalo weGym
Iimveliso zeTea zokhuni
Izinto zokudlala zomntwana ezifundisayo
Iiseti zokuTyisa abantwana
Ngapha koko, sinamawaka eemveliso ezinkulu kuwo onke amacandelo emveliso. Nokuba ujonga iilebhile eziphezulu okanye ezingabizi kakhulu, ukuthengwa kwezinto ezininzi ngezoqoqosho, siyaqinisekisa ukuba inokufumaneka kwiMelikey. Ukuba ufuna ukuthenga i-tableware encinci, i-Melikey inokuqinisekisa ukuba uhlala uzingca ngokuba nokukhetha ngobulumko. Ukutya kokondla kugxile ekukhuleni komntwana okusempilweni.
Sinikezela ngetafile yabantwana eyahlukeneyo, kubandakanya ibhibhi lomntwana, isitya sokondla abantwana, ipleyiti yosana, ipleyiti yabantwana kunye nendebe, njl. I-dinnerware yethu yosana inezinto ezininzi zoyilo ezihle, ekufuneka zilungele umntwana wakho. Izinto zeemveliso zethu zikhuselekile, ikakhulu zahlulwe zangumthi kunye ne-silicone. Inkuni yendalo kunye nokutya kwinqanaba lesilicone kuvumela iintsana ukuba zikhule ngendlela efanelekileyo yokutya. Iipleyiti zabantwana kunye nezitya ezityiwayo zithandwa kakhulu kwintengiso. Izitya zokutsala zabantwana kunye neepleyiti zabantwana abicah zingadibanisa ezinye iiseti zethu zabantwana china. Oku kubalulekile ekuzondleni komntwana ngexesha lesidlo, kusonjululwe iingxaki zomama. Vumela ukutya komntwana kugcwele ukonwaba!
Iiseti zethu zezinto zokutya zangokuhlwa ziza nemibala eyahlukeneyo, kubandakanya imibala yamakhwenkwe kunye neyentombazana. Xa sipakisha iimveliso kwaye ngaphambi kokuhambisa, siya kulungiselela ukuthuthwa emva kovavanyo olungqongqo lomgangatho ukuqinisekisa ukuba akukho ngxaki kwimpahla.
Asingomthengisi weetafile kuphela wosana kodwa ikwangumvelisi wesidlo sangokuhlwa. Sinikezela ngokusetyenzwa okwenzelwe wena isidlo sangokuhlwa, ilogo inokugoba kwiseti yesidlo sangokuhlwa kunye neseti yokutya komntwana. Kwakhona siyile iimveliso ngokugqibeleleyo kunye nokupakishwa kwabathengi. Ukuba unomdla kwi-china china dinnerware yethu, nceda unxibelelane nathi. Ishishini likaMelikey, uyilo, imveliso, indibano, kunye namasebe ovavanyo olusemgangathweni aya kukubonelela ngeyona nkonzo ibalaseleyo. Phakathi kwabathengisi beetafile abathengisa ngokubanzi, uMelikey akazukuyeka.
Iseti yesidlo sangokuhlwa ebalaseleyo, isitayile esifutshane nesilula yoyilo, umbala othandekayo kunye noswiti, Vumela umntwana atye ngakumbi anemibala kwaye anomdla. Iiseti zezipho zesidlo sangokuhlwa zinganikwa bonke abantwana abasandul 'ukuzalwa.
1. I-dinnerware ye-babyware ye-silicone engenamanzi kulula ukuyisula kwaye ihlambuluke
2. Abicah baby cutlery are Soft, Flexible And Easy To Fold
3. Abicah baby tableware are high temperature resistant
5. Ibakala lokutya le-baby silicone ye-tableware, engenatyhefu kwaye ikhuselekile
I-Silicone Baby Bib kunye neNqanaba lokuTya iBlood Toddler Wate ...
Baby Dinnerware Plate Icwangcisa ngokwezifiso Factory ...
Abicah Ukutya iNdebe yeBhola yomSebenzi eQinisekayo ...
Abicah iNdebe yeBhola yoQeqeshiso lwe-Sippy ye-Eco Fri ...
i-silicone engavunyelwa manzi kwiipokotho l iMelikey
Abicah esityeni Plate izitya yahlulwe Dinner OE ...
I-Silicone Baby Plate eyahlula i-Wholesale l Melikey
Silicone Baby Placemat Factory Wholesale lMelikey
Umntwana Spoon Kwaye Ifolokhwe Setha Stainless Usana
Baby Ukusela Cup BPA Simahla Cartoon Design Ngeendiza ...
Isitya sokutyisa abantwana kunye nobungqina bokuchitheka kwesipunu l Melikey
Bamboo Baby Bowls Tableware Ihowuliseyili l Melikey
Indebe Ukusela Indebe Ngeendiza ukuvuza Ubungqina Ukutya Gr ...
Baby iipleyiti Kwaye izitya BPA Free Ihowuliseyili Factor ...
I-Silicone Baby Bib I-soft zoManzi eziNgezi manzi ...
Uhlobo lweSitayile Sabantwana Silicone Bowl Ukutya kwiBanga l M ...
Abicah Baby Plate Ihowuliseyili Dinnerware Suppli ...
I-Silicone Baby Bib Amanzi angenasiphazamiso isiko ...
Iintsana zee Bibs ezineengxowa zokutya IBakala lokutya l Mike
Silicone Baby Plate yeCwecwe Beka iKhathuni ...
Abicah Baby Bowl sokufunxa Ukondla Akukho Spill l M ...
I-Silicone yokuKondla uMntwana nge-Spoon kunye neFolokhwe Iseta i-BPA F ...
Silicone Baby Placemat Yondla i-BPA Free l Melieky
Idilesi: 2F, iFektri yokwakhiwa kweNkampani yeAndy, uNombolo8. iZone, iZhongkai indawo ephezulu, Huizhou, Guangdong, China 516000
© Copyright - 2010-2019: Onke amalungelo agciniwe. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,AMP Mobile
abicah lwaba neengxakana amaso , abicah baby teether , abicah teether , teether kakhulu ngenyanga-4 ubudala , grade ukutya abicah amaso bulk, lwaba neengxakana yemvelo,